विदेशी सहयोगमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको फरक मत « Bizkhabar Online
विदेशी सहयोगमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको फरक मत
15 September, 2014 4:02 pm
सबै सहयोग चाहिन्छ– अर्थमन्त्री, ऋण चाहिदैन– गभर्नर
काठमाडौं, ३१ भदौ । पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई विकासशील श्रेणीमा पु¥याउने जिम्मेवारी लिएका सरकारी अधिकारीविच नै विवाद हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री विदेशी सहयोगमा लगानी बढाउने अभियानमा लागेका छन् भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी ऋण सहयोगको अर्थ नहुने बताउन थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको यस्तो विवादले विदेशी लगानीकर्तामा शंका भने पैदा गर्ने छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहन्छन् । विदेशी लगानी जुटाउन कै लागि उनले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीको बाताबरण राम्रो बनेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । विषेशगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक भएको र ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्ने हुदा सवै प्रकारको विदेशी लगानी आवश्यक हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा आफूलाई विकासशील श्रेणीमा उठाउन ९७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसको लागि नीजी क्षेत्रवाट ६६ खर्ब र सरकारी क्षेत्रवाट ३३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आठ वर्षको विचमा यति ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक हुने भएकोले सवै प्रकारको लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताउदै आएका छन् ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भने विदेशी ऋण सहयोगको कुनै अर्थ नहुने बताउछन् । सोमवार प्रभु बैंकको संयुक्त कारोवारको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विदेशी ऋण नेपाललाई आवश्यक नभएको विचार राखे । यस्तै बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाली मुद्रामा जारी गरेको ऋणपत्रले पूर्वाधार विकासमा खासै सहयोग नपुग्ने उनको आसय थियो ।
‘केहि साथीहरु यति खर्ब लगानी गर्नुपर्छ भन्दै अंक जपेर हिड्नु भएको छ’– गभर्नर डा. खतिवडाले भने– बस्तुपरक मूल्यांकन नगरी अंक मात्र जपेर हिड्दा दुर्घटनामा पर्ने सम्भवना बढी हुन्छ ।
यस्तै उनले वहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली मुद्रामा जारी गर्न लागेको ऋणपत्रको पनि घुमाउरो रुपमा विरोध गरे । विदेशी सेयर लगानी आवश्यक भएको समयमा ऋण सहयोग आएर कुनै प्रगति नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई अहिले विदेशी ऋण चाहिएको होइन, विदेशी इक्विटीमा पूर्वाधार निर्माण हुनुपरेको हो’ गभर्नर डा खतिवडाले भने– यसरी विदेशी र बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु ऋण दिन नेपालसम्म आइपुग्दा स्वदेशी पूजी लगानीमा संचालित बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था के हुने भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोमबार थप १९८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि : ३०४३ जना डिस्चार्ज,१६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा सोमबार थप १९८० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न
भारतीय विदेश सचिव बिहीबार काठमाडौं आउँदै, ओझेलमा परेका आर्थिक मुद्दामा होला छलफल ?
काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाले मंसिर ११ र १२ गते ९नोभेम्बर २६ र
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे घुन्सामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन उद्घाटन, ओलाङचुङ्गोला क्षेत्रको हवाई निरीक्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको
सुपथ मूल्य पसल माघे संक्रान्तिसम्म, २९ वटै केन्द्रबाट सञ्चालन हुने
काठमाडौं । चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालित सुपथ मूल्यका पसल आगामी माघसम्म सञ्चालन हुने भएको छ।